လူကောင်းလူတော်လား? လူတော်လူကောင်းလား? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » လူကောင်းလူတော်လား? လူတော်လူကောင်းလား?
Posted by weiwei on Jun 25, 2011 in Creative Writing | 19 comments
ကျွန်မတို့ သူငယ်ချင်းတွေ ရောက်တက်ရာရာပြောကြရင်း လူကောင်းလူတော်နဲ့ လူတော်လူကောင်းအကြောင်း ဆွေးနွေးဖြစ်ကြပါတယ်။ ကျွန်မကို သူငယ်ချင်းက လူကောင်းလူတော်ဖြစ်ချင်လား လူတော်လူကောင်းဖြစ်ချင်လားလို့ မေးပါတယ်။ စကားလုံးနှစ်ခုက တူမလိုလိုနဲ့ သေချာစဉ်းစားလိုက်တော့ မတူတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။
ကျွန်မကတော့ လူကောင်းလူတော်ပဲ ဖြစ်ချင်လို့ ဖြေလိုက်ပါတယ် ….
ရှေးယခင် ဘိုးဘွားမိဘများလက်ထက်တုန်းက လူတွေမှာ လူကောင်းတွေများပြီး လူတော်နဲပါတယ်။ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းပြီး ရိုးသားကြသူများ ပေါများခဲ့ကြပြီး အသိပညာအတတ်ပညာသင်ယူရန် အခွင့်အရေးနဲပါးခဲ့ခြင်းကြောင့် လူကောင်းပြီးမှ လူတော်ဖြစ်နိုင်လို့ လူကောင်းလူတော်ခေတ်လို့ သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ (လူကောင်းမှ လူတော်ဖြစ်နိုင်)
အခုခေတ်ကျတော့ ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ လူတွေမှာ လူတော်များလာပြီး လူကောင်းနဲလာပါတယ်။ အသိပညာ အတတ်ပညာတွေသင်ကြားနိုင်လို့ လူတော်တွေပေါများလာပေမယ့် အကျင့်စာရိတ္တပိုင်းမှာ အားနဲလာပါတယ်။ ပညာပိုသင်နိုင်မှသာ အသိဥာဏ်တိုးမြင့်လာပြီး လူကောင်းဖြစ်လာမည့် အခွင့်အရေးရနိုင်မည်ဖြစ်ပေမယ့် ပညာသင်ယူခွင့်မရနိုင်တဲ့ လူတန်းစားများအတွက် လူကောင်းဖြစ်ရန် အခွင့်အရေးနဲလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူတော်ပြီးမှ လူကောင်းဖြစ်နိုင်လို့ လူတော်လူကောင်းခေတ်လို့ သတ်မှတ်ချင်ပါတယ်။ (လူတော်မှ လူကောင်းဖြစ်နိုင်)
ကျွန်မ၏ စိတ်ကူးနဲ့အတွေး သက်သက်သာဖြစ်ပါသည်။
သင်ယူဘို့ အခွင့်အရေးအပြည့်အ၀ရှိလာတာရယ် လူငယ်တွေကိုယ်တိုင်က တိုးတက်ဘို့ကြိုးစားချင်စိတ်ပြင်းပြလာကြလို့ပေါ့။
အချိန်တိုင်းမှာ အမှတ်ကောင်းကောင်းရဘို့ သာလုံးပန်းနေကြတော့ ကျောင်းစာကလွဲရင်ဘာမှမသိတော့ပါဘူး။
မိဘဆွေမျုိုးသားချင်းများကလဲ စာကလွဲရင် ကျန်တဲ့ ဗဟုသုတအတွက်အားမပေး.။
ကျောင်းက ဆရာဆရာမများကလဲ ကျောင်းသား ဒီများများနဲ့အောင်ဘို့ ၀ိုင်းလုံးပန်းပေးတာကလွဲရင်
ကလေးကလဲ စာကစာဆိုတော့ တဖြည်းဖြည်းအတ္တသမားကျနော်စိတ်ဓါတ်တွေဘဲ ကိန်းအောင်းနေပါတော့တယ်။
ဒီတော့လဲ လူတော်တွေများပြီး လူကောင်းတွေရှားလာပါတယ်။
အပြိုင်အဆိုင်အားကြီးလွန်းတဲ့ ၂၁ရာစုခေတ်မှာ လူတွေကိုတ်ာအောင် လေ့ကျင့်ပေးပြီး မှန်ကန်တဲ့စနစ်နဲ့ ထိန်းခြင်းသာလျင် လက်တွေ့ဆန်တဲ့ ဖြေရှင်းမှုဖြစ်ပါမယ်။ သမိုင်းမှာ လူတွေကောင်းပေမဲ့ ကိုယ်ချည်းသက်သက် တံခါးပိတ်နေလို့ မရတဲ့အခါ လူတော်တွေရဲ့ ဗိုလ်ကျမှုခံရတာ အထင်အရှားပါပဲ။ အခြားတဖက်က ပြန်ကြည့်ရင်လည်း ကိုယ်ကကောင်းပေမဲ့ နောက်မျိုးဆက်က ကျင့်ဝတ်စောင့်ထိန်းမှုပိုင်းမှာ ကိုယ်လိုမလိုက်နိုင်ရင် သူတို့ထက်တော်နေသူများရဲ့ အနိုင်ကျင့်မှု ခံရပါအုံးမယ်။
လူတော် လူကောင်း ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစား နေပါတယ်။
တစ်ချို.ရှိတယ်လေဗျာ မေးလိုက်ရင် အင်ဂျင်နိယာ လုပ်ချင်တာ
တော်ဘို့နေနေသာသာ ကောင်းအောင် တောင် မနည်းကြိုးစားနေ ရတယ် …..ဆက်လုပ်ကြပါ ..ဘတို့ကကြီးပီ ဘုရားပဲရှိတော့တယ်။
လူရယ်လို့ ဖြစ်လာရင် အစွမ်းအစရှိတဲ့ လူတော်ဆိုတဲ့ အရည်အချင်းရယ်၊ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းတဲ့ လူကောင်းဆိုတဲ့ အရည်အချင်းရယ် နှစ်မျိုးလုံးနဲ့ ပြည့်စုံရပါမယ် လို့ ကြားဖူးပါတယ်။ အကယ်၍ မဖြစ်မနေ အရည်အချင်းတစ်ခုပဲ ရနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ လူကောင်းကို ရွေးရပါမယ်။ လူတစ်ယောက် မတော်ရင် တစ်ယောက်စာပဲ နစ်နာပြီး လူတစ်ယောက် မကောင်းရင်တော့ လူအများကြီးကို နစ်နာစေနိုင်ပါတယ် တဲ့လေ။
လူတော် ဖြစ်အောင် လေ့ကျင့်ပေးဖို့အချိန် သိပ် မလို ဘူးလို့ ထင်ပါတယ် ။ လူကောင်းဖြစ်ဖို့ ကြတော့ ငယ်ငယ်ကလေး ကတဲ က အခြေခံ စိတ်ဓါတ် စည်းကမ်း တွေ အကုန်နားလည်အောင် သင်ကြားပေးခဲ့မှ လို့ ထင်ပါတယ် ။ ဆိုးမိုက်ပေတေ လာတဲ့သူ တော်တော် များများ ဟာ တစ်တက် စားလည်း ကြက်သွန် တို့သန်းခေါင် ထက် ညဉ့်မနက် တို့ အစရှိတဲ့ စကားတွေ ကို လက်ကိုင်ထားကြတာ ကို တွေ့ ရပါတယ် ။ ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ ခွေးမြီးကောက် ကျည်တောက်စွပ် ဆိုတဲ့ စကားလေး ရှိလို့ ပါ ။ အထင်ကို ပြောပြ ကြည့်တာပါနော် ။
သွားလေသူကြီး ဦးနေ၀င်း ခေတ်တုန်းက
အလွန် ငြင်းခုန်ခဲကြတဲ. အကြောင်းရာပါဘဲ
လက်တွေ.မှာ လူတယောက်ဟာ တော်တဲ.(နေရာ/ အချိန်ခါ )ရှိသလို
ဦးနေ၀င်းက.. အဲဒီစကားလုံးကို ပြင်ကိုခိုင်းခဲ့တာလို့ မှတ်မိတယ်..။
လူတော်လူကောင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့.. လူကောင်းလူတော် ဆိုပြီး သူ့မိန့်ခွန်းမှာကို ပြောတယ်မှတ်မိတယ်..။
လူတော်ဆိုတာက.. လူက တော်နေတယ်ဆိုပါတော့…။
တော်လူ. .တော်နေတဲ့လူက ပိုမကောင်းဘူးလား..။
ကောင်းလူ.. ကောင်းနေတဲ့လူကို..အဲဒီလိုရေးတာ ပိုမသင့်တော်ဘူးလား..။
ကောင်းလူ လူတော် ဆိုလည်းရတယ်နော..
တော်လူ လူကောင်း လည်း ဖြစ်မလားပဲ..
လူကောင်း တော်လူ ဆိုရင်ကော..
( ဝေမမ ကိုနောက်လိုရင်းနဲ့ ရေးတာတွေသာဖြစ်ပါတယ်နော…။ မကြိုက်ရင် အနီကဒ်ပြလိုက်)
ကိုယ့်အမြင်မှာတော့လူတော်ဖြစ်ဖို့ထက် လူကောင်းဖြစ်ဖို့ က ပိုအဓိကကျတယ်လို့ထင်မိတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လူတော်ဖြစ်ပြီး ကြောက်စရာကောင်းအောင် ဆိုးတဲ့သူကိုတွေ့ဖူး လို့ပါ အချိန်ရရင် ပို့စ်ရေးတင်ပါ့မယ်
လူကောင်းလူတော်ဆိုတာ မြန်မာပြည်မှာပဲ ရှုပ်နေတာ။ ကမ္ဘာက လက်ခံထားတဲ့ပုံစံက ကောင်းတဲ့လူဟာ တော်လည်းတော်တယ်။ တော်တဲ့လူဟာ ကောင်းလည်းကောင်းတယ်တဲ့။ ပညာရည်ပြည့်ဝတဲ့လူတွေ အင်မတန်နှလုံးလှတာ ကြုံဖူးပါတယ်။
လူတော်ပြီး မကောင်းတဲ့သူ ဆိုရင် အန္တရာယ်များတယ်။
မကောင်းတဲ့သူ ဆိုရင် မ တော်မှ ဖြစ်မယ်။
နို့မို့ဆိုရင် မကောင်းတဲ့သူတွေဘဲ တော်နေရင် ….. မကောင်းတဲ့ ဘက်မှာဘဲ ထူးချွန်နေကြမှာ
ဒါမှ အများအကျိုးကို ဆောင်ရွတ်နိုင်မှာ…
ကောင်းတာနဲ့ တော်တာနဲ့ ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ ရှုပ်ကုန်ကြပြီ …
၀ိုင်းဆွေးနွေးပေးကြတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် …
ကျနော် အမြင်ကတော့ အရင်ဆုံးတော်တယ်ဆိုတာကို ဘယ်လိုအဓိပါယ်ဖွင့်မလဲ၊ ကောင်းတယ်ဆိုတာကို ဘယ်လို အဓိပါယ်ဖွင့်မလဲ။သင်လွယ်တတ်လွယ် ထိုးထွင်းဥာဏ် ရှိပြီး bright ဖြစ်တဲ့သူတွေကိုလူတော်၊ ခိုးဝှက်ခြင်း ကင်းပြီး အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းတဲ့သူတွေကို လူကောင်း လို့ဆိုကြပါတယ်။ ဘယ်သူကပိုကောင်းလဲဆိုတာကတော့ လုပ်ငန်းရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ အလုပ်ရှင်ရဲ့ထိမ်းကြောင်းမှု အပေါ်မူတည်ပါတယ်။
No man is perfect ဆိုလားဘာလားပဲ
ဝေေ၀ရေ တို့ကတော့ တော်လဲ မတော်ဘူး ..အကောင်းကြီးထဲမှာလဲ မပါဘူး .. သာမန် အဆင့်ပဲ ဆိုတော့
ဒီစကားဝိုင်းမှာ သိပ် မဆွေးနွေးရဲဘူး ..
အကျင့်ကောင်းပြီး လိုအပ်သလောက် စွမ်းဆောင်နိုင်ရင်ပဲ ကိုယ်တိုင်အတွက်ရော လောကကြီးအတွက်ပါ ကောင်းမှာပါ .. အကျင့်ကောင်းဖို့ အရေးကြီးမယ် ထင်ပါတယ်
လူတော်လူကောင်း (၀ါ) လူချွန်လူကောင်း
ကောင်းရုံနဲ့ လောကကြီးအတွက် ကောင်းကျိုးပြည့်ပြည့်၀၀ မပေးနိုင်သလို
တော်ရုံ ချွန်ရုံနဲ့လည်း ပြည့်ပြည့်၀၀ အကျိုးပြုနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး လို့ထင်ပါတယ်ရှင်…။
အင်း စ ဖောရမယ်ဆိုရင် … အဲ … တောင်းပန်ပါတယ် စ ပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့
လူဆိုတာ လူ(၄)မျိုးရှိတယ်လို့ အကြမ်းဖြင်း ခွဲလို့ရတယ်ဗျ …
(၂) လူတော် မကောင်းရယ်
(၃) လူကောင်း မတော်ရယ်
(၄) လူမကောင်း မတော်ရယ် ဆိုပြီးတော့ပေါ့လေ
ကျွန်တော်ကတော့ လူကောင်းမှ လူတော်ဖြစ်ဖို့ များတယ်လို့ထင်တယ်
လူတော်ဖြစ်ပေမယ့်လည်း ကောင်းချင်မှ ကောင်းမှာကိုး
ဥပမာတွေ ပြောရရင် မြန်မာပြည်မှာပဲ ကြည့်ပါ ဦးစော ပေါ့ သူက လူတော်တစ်ယောက်ပဲ
အင်္ဂလိပ်ခေတ်မှာတောင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးမင်းကြီး (ပထမဦးဆုံး) ဖြစ်တာနော် …
ဟစ်တလာ … သူလည်း လူတော်နော် … ဆက်မပြောတော့ဝူး ဆက်ပြောရင် ဇာတ်သဘောတွေပါနေမှာစိုးလို့
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ကတော့ လူကောင်းလူတော် ဖြစ်ပါစေလို့ ပဲ ဆုပေးချင်သလို ….
လူကောင်းလူတော် လေးတွေပဲ ဖြစ်စေချင်တယ် …. နောက်ကြုံမှပဲ ဆက်ရေးတော့မယ်
အခုတော့ ခေါင်းကိုက်နေတယ် ….
မဖြစ်သေးတဲ့ အကုသိုလ်တွေကို တားနိုင်
ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေကို ပယ်နိုင် ရင် လူကောင်း
မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေကို ရအောင် လုပ်နိုင်ရင် လူတော် ပါတဲ့။
ဒီနေရာမှာ အကုသိုလ်ကို မကောင်းမှုမှန်သမျှ
ကုသိုလ်ကို ကောင်းမှုမှန်သမျှ လို့ ပြောချင်ပါတယ်။